Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Jayden Braaf, Erling Haaland, David Alaba,Carlos Tevez, Lautaro
Home Suuqa kala iibsiga Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Jayden Braaf,...
ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga Qeybta Saaka oo subax walbo saacadan oo kale aad la socotaa
Ciyaaro.com kala soco Xubintan maali walbo 07:00 Am Waqtiga Somaliya anaga oo ku soo qaadano wararka ugu muhiimsanaa ee Suuqa kala iibsiga.
Jayden Braaf ayaa ku dhow inuu dhameystiro ku biiristiisa kooxda Serie A ka dhisan ee Udinese, (Tuttomercatoweb) .
Erling Haaland ayaa isku diyaarinayaa inuu sii joogo kooxda Borussia Dortmund ilaa iyo 2022 sida laga soo xigta wariye (Fabrizio Romano).
Daafaca Newcastle DeAndre Yedlin ayaa qarka u saaran inuu la saxiixdo kooxda Galatasaray, ( ESPN) .
Manchester City ayaan ku soo biiri doonin tartanka loogu jiro daafaca Bayern Munich David Alaba, sida ay qortay (90min).
Carlos Tevez ayaa sheegay inuusan arki karin laacibka reer Argentina ee Lionel Messi oo kooxo kale ku biiraya (Goal).
Agaasimaha isboortiga Sampdoria Carlo Osti ayaa sheegay in kooxda ay rajeyneyso inay ceshato Fabio Quagliarella. (Goal)
Lautaro Martinez ayaa qarka u saaran inuu saxiixo qandaraas cusub oo kooxda Inter ah iyadoo loo kordhinayo heshiiska kooxda iyo mushaharka, (Gazzetta dello Sport).
Goolhayaha Man Utd ‘zombie’ ayaa si maldahan u sheegay inuu dhaqaaqayo dhawaan (Thesun)
Liverpool ayaa laga yaabaa inay ku dhibtooneyso daafacyada dhexe, laakiin Football Insider ayaa sheeganeysa in Sepp van den Berg amaah lagu dirayo. (Football Insider)
AC Milan ayaa dooneysa inay amaah kaga soo qaadato Diogo Dalot kooxda Manchester United, sida ay qortay (The Sun).
Shkodran Mustafi ayaa kasoo muuqday bartilmaameed daafaca Liverpool ah xili kooxda horay u sheegtay in aysan qorsheeneynin Xidigo cusub (Goal)
Reds bos Jurgen Klopp ayaa sheegay inuu doonayo daafac dhexe oo cusub, laakiin uusan diyaar u ahayn inuu bixiyo “lacag waali ah”. (Evening Standard )
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta oo ka hadlayay shirkiisa jaraa’id ee ciyaarta ka dib barbarihii 0-0 ee ay la galeen Man Utd, waxaana uu si maldahan u sheegay inay ka sii fiicnaan karaan sida hada aha ay yihiin ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga. (Goal)
Previous articleFalaqeynta Kulanka Barcelona Vs Athletic Bilbao ee Horyaalka La-liga Dalka Spain
Next articleManchester United oo bartilmaameed ka dhiganeysa Daafaca Sevilla ee Jules Kounde